काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि सार्वजनिक बस सञ्चालन, पसल पनि दिनभर खोल्न पाइने (आदेशसहित) - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि सार्वजनिक बस सञ्चालन, पसल पनि दिनभर खोल्न पाइने (आदेशसहित)
काठमाडौँ। उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप खुकुलो पारिएको छ । उपत्यकाभित्र आजदेखि सार्वजनिक बस सञ्चालन भएका छन्। यस्तै खाद्य पसल बिहान ६ बजेदेखि तथा अन्य पसल बिहान ११ बजेदेखि दिनभर खोल्न पाइनेछ।
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएयता गत वैशाख १६ गतेदेखि उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात बन्द थियो भने निजी सवारीसाधन पनि जोर–बिजोर प्रणालीमा अघिल्लो हप्तादेखि मात्र खुला गरिएको हो।
यस्तै आजबाट खाद्य पसल बिहान ६ बजेदेखि तथा अन्य पसल पनि बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ।
सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, दोहारी, नाचघर क्लब, स्वीमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, सैलून,ब्यूटी पार्लर, हेल्थक्लब, फुटसल, जिमखाना पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना, रंगशालामा हुने दर्शक सहितको खेलकुद र मानिसहरुको भिडभाड हुने अन्य कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने ।
खुल्ला स्थानमा मासिनहरु भेला जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस, जात्रा, महत्सोव, भोज-भतेर आदि गर्न गराउन नपाउने ।
विवाह, व्रतबन्ध तथा सामूहिक रुपमा गरिने साँस्कृतिक कार्यहरु होटल तथा पार्टी प्यालेसमा गर्न नपाउने ।
पुजारीबाट हुने नित्य पूजा बाहेकका अन्य धार्मिक तथा संस्कृतिक गतिविधिहरु संञ्चालन गर्न नपाउने ।
सर्वसाधारणहरुको आवत जावतको हकमा –
घरबाट बाहिर निस्किँदा दुई व्यक्तिबीच कम्तिमा २ मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्ने । अनिवार्य रुपले माक्सको प्रयोग गर्ने ।
शैक्षिक संस्था,कृषि/उद्योग तथा निर्माण कार्यको हकमा
शैक्षिक संस्थाहरुले अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन कार्यहरु सञ्चालन गर्न सक्ने ।
सवारी साधन मर्मतका लागि वर्कशपहरु साँझ ७ः०० बजेसम्म सञ्चालन गर्ने ।
विवाह वर्तबन्धको हमा बढीमा १५ जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्ने गरी आफ्नो घर वा बसेको स्थानमा गर्ने ।
के के गर्न पाइने, के के नपाइने? यस्तो छ आदेश: